Excel အကြောင်းလေးပြောကြည့်ရအောင် - Page5- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်များ » အထွေထွေဗဟုသုတ
20-03-2012, 02:01 PM
ပို့စ် 22 ခုအတွက် 77 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Excel အကြောင်းလေးပြောကြည့်ရအောင်
မောင်လေးရေ ယူနစ်တွေက အများကြီးဆို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ နော် ထပ်ရှင်းပြပေးပါအုံးနော်
ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်........ယူနစ်တွေကလေ Rms , Dzs, Packs, Shts
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ နီလာချစ်သူ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
linthuraaung, ngwe oo, pannuko
Find More Posts by နီလာချစ်သူ
20-03-2012, 04:54 PM
ပြန်စာ - Excel အကြောင်းလေးပြောကြည့်ရအောင်
Originally Posted by နီလာချစ်သူ
ယူနစ်တွေ အများကြီးဆိုတာ ကျွန်တော် ပုံမှာ နမူနာပြထားတဲ့အတိုင်း Column တစ်ခု (သို့မဟုတ်) Row တစ်ခုကို ယူနစ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလား အစ်မ? အဲလို တစ်ခုချင်းစီဆိုယင် ကျွန်တော် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း " စာအုပ် " Column မှာ Bks ထည့်ချင်တယ်ဆိုယင် Column တစ်ခုလုံးကို Select ပေးပြီး Format Cells မှာ #,##0 "Bks" ထည့်ပေး၊ " ခဲတံ " Column မှာက Dzs ထည့်ချင်တာဆိုတော့ ခဲတံ Column တစ်ခုလုံးကို Select ပေး #,##0 "Dzs" ထည့်ပေး၊ တခြား Column တွေက ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ ယူနစ်တွေအတွက်လည်း ထို့အတူပဲ Column တစ်ခုလုံးကို Select ပေးပြီး #,##0 "ထည့်ချင်တဲ့ယူနစ်" ကိုပြောင်းပေးမယ်ဆိုယင် Column တစ်ခုစီအလိုက် ယူနစ်တွေက ပြောင်းနေမှာပါ အစ်မ။ တကယ်လို့ အစ်မလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံက ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း မဟုတ်ခဲ့ယင်တော့ ပြန်ပြောပေးပါအစ်မ။ သိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကနေ ထပ်မံဖြေကြားပေးကြပါလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေပါစေအစ်မ...
နီလာချစ်သူ, linthuraaung, ngwe oo, pannuko
21-03-2012, 12:58 PM
အစ်မ လိုချင်တာက coloum တစ်ခုတည်းမှာ ဆိုယင်ကော ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလေ.......
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ နီလာချစ်သူ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ်7ခုအတွက် 20 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
office 2007 မှာ print preview ကြည့်ချင်လျှင် ctrl+f2
အပေါ်ဆဲလ်ကွက်က စာကိုကူးချင်လျှင် တစ်ကွက်ကူးလျှင် ctrl+D
အကွက်များလျှင် အောက်ကဆဲလ်ကို အပေါ်ဆဲလ်ကွက်နှင့်အညီ select လုပ်ပြီး ctrl+D
ဇယားကွက်တွေများပြီး စာရွက်မဆန့်တော့ဘူးဆိုလျှင် view menu မှ page break preview နဲ့ကျုံ့လို့ရပါတယ်
print preview ကြည့်ချိန်တွင် page setup ကိုခေါ်ချင်လျှင် ctrl+S နှိပ်ပြီးရွေးလို့ရပါတယ်
print preview ပြန်ပိတ်လျှင် C ကိုနှိပ်ပါ ဒါပါပဲ ဟဲဟဲ
office 2007 မှာ print preview ကြည့်လျှင် ctrl+f2
ဇယားမဆန့်လို့ကျုံ့ချင်လျှင် view menu ထဲက page break view နဲ့ပြင်လို့ရပါတယ်
ဇယားတွေထဲမှာ - တို့0တို့ကို အစစာလုံးနဲ့ရိုက်မရပါက ဒ ခံရိုက်ပါ
Last edited by tu tu; 01-06-2012 at 01:05 PM.. Reason: merge posts
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ linthuraaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, နီလာချစ်သူ, ngwe oo, pannuko, tu tu
Find More Posts by linthuraaung
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 27 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by အောင်လွင်ဦး
မေးဦးမယ်ဗျာ။ Excle မှာ 1,000,000,000 ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ် ဂဏန်း ပေါ်အောင် လုပ်လို့ရပြီး ဗမာဂဏန်းပြောင်းလိုက်ရင် ၁ယ၀၀၀ယ၀၀၀ယ၀၀၀ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဗမာဂဏန်းနဲ့ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ပေါ်အောင်လုပ်လို့ရပါသလား သိချင်လို့ပါ။
ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် Home Tap အောက်ရှိ Number Group တွင် ရှိသော comma style ကိုရွေးချယ်ပေးထားပါ။
(1) Office Menu မှ Excel Option ကိုသွားပါ။
(2) Excel Option မှ Advanced Tap ကိုနှိပ်ပါ။
(3) ညာဘက်အခြမ်းတွင်ရှိသော Use system separators Check Box တွင်အမှန်ခြစ်ကို ဖြုတ်ပါ။
(4) ၄င်းအောက်တွင်ရှိသော Thousands separator ၏ဘေးအကွက်တွင်ရှိသော ကော်မာ (,) ကိုဖျက်၍ အဲဒီနေရာတွင် (Alt + 0231) ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
(5) ပြီးလျှင် OK ပေးလိုက်ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ phyuphyukyaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, နီလာချစ်သူ, bagothar85, ngwe oo, pannuko, tu tu
Find More Posts by phyuphyukyaw
Originally Posted by phyuphyukyaw
မသိသေးတာတွေ သိခွင့်ရလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ....။ ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တာ Win font တွေမှာတော့ အဆင်ပြေပါတယ် ...။ ကျွန်တော်က Excel မှာရိုက်ရင် Zawgyi font နဲ့ရိုက်တာများပါတယ်။(မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ပြောင်းရတာလွယ်လို့ပါ ....) အဲဒါ ..... Zawgyi font နဲ့ ၁၂၃,၄၅၆,၇၈၉ လိုမျိုးပေါ်စေချင်ရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ ခင်ဗျာ ....။ စာစီစာရိုက် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကျွမ်းကျင်လို့ပါ ....။
Originally Posted by ဇာနည်စိုး
မသိသေးတာတွေ သိခွင့်ရလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ....။ ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တာ Win font တွေမှာတော့ အဆင်ပြေပါတယ် ...။ ကျွန်တော်က Excel မှာရိုက်ရင် Zawgyi font နဲ့ရိုက်တာများပါတယ်။(မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ပြောင်းရတာလွယ်လို့ပါ ....) အဲဒါ ..... Zawgyi font နဲ့ ၁၂၃,၄၅၆,၇၈၉ လိုမျိုးပေါ်စေချင်ရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ ခင်ဗျာ ....။ စာစီစာရိုက် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကျွမ်းကျင်လို့ပါ ....။
ကျွန်တော် တွေ့တာလေးကို ပြောပေးလိုက်ပါတယ် အစ်ကို... Options မှာ ချိန်းတာကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်တွေ့တာလေးကတော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ အစ်ကို လုပ်ချင်တဲ့အကွက်ကို Right Click >> Format Cells >> Number ရဲ့အောက်က Custom ကိုရွေး၊ ကျွန်တော်ပုံမှာပြထားတဲ့ [$-10000455]#,##0 ကို ရွေးလိုက်ပြီး အပေါ်က Sample မှာကြည့်လိုက်ယင် အစ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအောက်က [$-10000455]0 ကတော့ ကော်မာမပါတဲ့ဟာပေါ့။ ထိုနည်းတူစွာပဲ အဲဒီထဲက အကွက်တွေကို လိုက်ရွေးကြည့်ပြီး Sample မှာ ကြည့်လိုက်ယင် အစ်ကိုလိုချင်တာကို စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ ရပါသေးတယ်။ အခုရွေးတဲ့ Number Format က ပေါင်း,နုတ်,မြောက်,စား.. တွေကိုလည်း တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါလေးနဲ့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ အစ်ကို။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, minlatt, phyuphyukyaw, tu tu
23-07-2012, 11:17 AM
Excel မှာ Formulas Function အကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြစေချင်ပါတရ်
ဥပမာ- Home ထဲက Editing မှာ Auto Sum ရှိပြီး More Function ထဲမှာပါတဲ့ Function တွေအကြောင်းကို အသေးစိတ် ရှင်းပြစေချင်တာပါ- ဒါမှလည်း ဘယ်လို အကျိုးသတ်ရောက်တယ်၊ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်လို့ ရမယ်ဆိုတာတွေကို ရှင်းပြစေချင်ပါတရ်
ကျွန်တော်ကတော့ နည်းနည်းပါးပါးပဲသိတာမို့လို့ မရှင်းပြတတ်တဲ့ လူအလေးပါ၊ ဒါကြောင့် အအကျယ်တ၀န့် ရှင်းပြပေးစေချင်တာပါ
30-07-2012, 03:06 PM
excel မှာ ပစ္စည်း အမျိုး အမည်တွေ အများကြီးကို စာ၇င်းလုပ်ပီး ရှေ့ တစ်မျက်နှာမှာတော့ လက်ကျန် ( Balance) ကို တစ်ခါတည်ကြည့် ချင်တာပါ နောက်က စာရင်းတွေ ပြောင်းလိုက်တာသူက လက်ကျန်ပါ လိုက်ပြောင်းတာလေ ဟို Link ချိတ်တယ် ခေါ်မလားအဲဒါကို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ နားမည် လို့ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ နီလာချစ်သူ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ngwe oo, nyi.nyi
31-07-2012, 11:30 AM
ပို့စ် 150 ခုအတွက် 1,033 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် မသိတာလဲ မေးရင်း နဲ့သိတာလေး လဲ ပြောရင်းနဲ့ 
ဒါ ဆိုရင် G: drive ထဲက "new folder" ထဲက excel file "myBook2.xlsx" ရဲ့"Sheet1" လို့ ခေါ်တဲ့ sheet ရဲ့cell A15+B15+C15+D15+E15 ကို ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ ဆိုရင် F: drive ထဲက excel file "Book2.xlsx" ရဲ့"Sheet2" လို့ ခေါ်တဲ့ sheet ရဲ့cell A7 to E7 ကို ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ က "mySh5" လို့အမည် ပေးထားတဲ့ sheet ရဲ့cell A10 ကနေ E10 ကို ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ က "Sheet2" လို့အမည် ပေးထားတဲ့ sheet ရဲ့cell A5 ကနေ E5 ကို ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို sheet named "sheet2" ရဲ့cell G11 နဲ့sheet named "mySh5" ရဲ့cell B4 နဲ့G: drive new folder ထဲက myBook2 ရဲ့Sheet1 ရဲ့cell A6 ကို ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ nyi.nyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သမီး, နီလာချစ်သူ, bagothar85, ngwe oo, tu tu
Find More Posts by nyi.nyi
05-08-2012, 12:16 AM
@popularsn မင်္ဂလာပါ။ တွေ့ ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ Excel နဲ့Access ကို link လုပ်တာ လွယ်ပါတယ်။ ပထမ Access ထဲကို excel ထဲက table ကို သွင်းချင်တယ် ဆိုရင် access ထဲမှာ (Microsoft office 2010)
Menu > External Data > excel ကို နှိပ်
Get External Data ဆိုတဲ့ window ပွင့်လာရင် အဲ့ဒီမှာ File name နေရာမှာ သွင်းချင်တဲ့ excel file ကို ရွေး
အဲ့ဒီမှာ option ၃ ခု ရှိတယ်
1) Import the source data intoanew table in the current database
2) Appendacopy of the records to the table
3) Link to the data source by creatingalinked table
အောက်ဆုံး တစ်ခု က excel ထဲက table ကို access ထဲကို read only link လုပ်ယူလိုက်တာပါ။
အဲ့ဒီ table ကို access ထဲမှာ ပြင်လို့ မရပါဘူး။ excel ထဲမှာ ပြင်သမျှ အဲ့ဒီ access ထဲက table မှာလဲ လိုက်ပြောင်း ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့read only link table အနေနဲ့မယူချင်ဘဲ excel ထဲက data တွေကို import လုပ်ရုံ သက်သက် ဆိုရင်တော့ အပေါ်က option ၂ ခု ကို သုံးပါ။
Excel ထဲကို access database ထဲက data တွေ ယူချင်တယ် ဆိုရင်လည်း အဲ့ဒီ နည်း အတိုင်းပါဘဲ။
Excel ထဲမှာ Menu မှာ Data ကို သွားပြီး
Get External Data နေရာမှာ From Access ကို ရွေး
နောက် link ချင်တဲ့ Access file ကို ရွေး
table ကို ရွေး
အဲ့ဒီ table ကို ထားမယ့် နေရာ cell ကို ရွေး
Ok နှိပ် ဒါဆို Access ထဲက table ကို တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီ Access ထဲက table မှာ ပြင်သမျှ ဒီ excel ထဲက table မှာလဲ သူ့ အလိုလို လိုက်ပြင် သွားပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့သူ့အလိုလို လိုက်မပြင်ဘူး ဆိုရင် အပေါ်က menu မှာ Refresh All ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင် ပြင်သွားပါလိမ့်မယ်။
တခြား database ဒါမှမဟုတ် query တစ်ခု ကို ဆက်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း အဲ့ဒီလိုပါဘဲ
Excel Menu > Data > Get External Data > From Microsoft Query
Choose Data Source ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့datasource (ဥပမာ MS Access Database)
Database file ကိုရွေး
Table နဲ့column ကို ရွေး
အဲ့ဒီမှာ ကိုလိုချင်တဲ့ filter နဲ့sorting ထည့်
Excel မှာ ထည့်ချင်တဲ့ နေရာ ကို ပေး ok နှိပ်
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ nyi.nyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, နီလာချစ်သူ, bagothar85, g00gle, naynayz, ngwe oo, pannuko, tu tu, zo
27-10-2012, 10:57 AM
NAY ZAR AUNG
ပို့စ် 51 ခုအတွက် 278 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
exel မှာ sheet 1 sheet2ဆိုတဲ့နေရာကို မြန်မာနဲ့ရေးချင်တာ ရေးလို့မရလို့ ဘယ်လို့ ရေးရလဲ သိလို့ ရှိရင် ပြောပေးကြပါ အုံးနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ NAY ZAR AUNG အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇေကြီး, ngwe oo
NAY ZAR AUNG ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by NAY ZAR AUNG
27-10-2012, 05:44 PM
ပို့စ် 213 ခုအတွက် 1,248 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မနီလာပြောတာ function တွေနဲ့ ချိတ်တာထင်တယ် ချယ်လည်းအဲဒါပဲသုံးနေတာများတယ် မနီလာက အဝင်အထွက်စာရင်းပဲရိုက်ထည့်ချင်ပြီး လက်ကျန်ကိုတစ်ခါတည်း စုစုပေါင်းဖော်ပြစေချင်တယ်ဆိုယင်တော့ IF နဲ့ SUMIF ကိုတွဲသုံးရပါမယ် အဲ ဒါကတော့ တဖက်စာမျက်နှာမှာ အော်တိုလုပ်ပေးသွာပါတယ် ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလေးပေါ့
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ချယ်ရီမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇေကြီး, မေဦးမွန်, g00gle, ngwe oo, pannuko, tu tu
Find More Posts by ချယ်ရီမင်း
08-02-2013, 03:35 PM
I'd like to ask you one question.
How can i calculate (create formula) in excel file when we face below situation?
1 Carton =5Bags
Category Receipt Issue Balance
Carton Bags Carton Bags Carton Bags
opening 5000500 0
Sale 203479 2
So, How can i add formula in that case?? please....
Last edited by mars; 09-02-2013 at 11:27 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ mars အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ngwe oo, zo
13-02-2013, 11:15 AM
excel မှာ ကျပ်၊ ပြား column တိုင်ကိုထည့်ပြီး closing balance ကို formula နဲ့ auto ပြပေးစေချင်လို့ပါ
20-02-2013, 12:26 PM
excel မှာ ကျပ်၊ ပြား column တိုင်ကိုထည့်ပြီး closing balance ကို formula နဲ့ auto ပြပေးစေချင်လို့ပါ
ကျွန်တော် ရှာလို့တွေ့တာလေးကို ပြောပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ အစ်ကို ဒီ Formula ကို မသုံးခင် အထပ်ထပ် စမ်းသပ်တွက်ချက်ကြည့်ပြီး အဖြေမှန်ပါမှ သုံးဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ စာရင်းဇယားတွေဆိုတော့ မှားမှာစိုးလို့ပါ။
Formula : =SUM(B2:B5)+INT(SUM(C2:C5)/100)&" ကျပ် "&100*MOD(SUM(C2:C5)/100,1)&" ပြား"
Formula: ကို ရှင်းပြရမယ်ဆို
SUM(B2:B5) ဆိုတာက " ကျပ် " ရဲ့အောက်က B2 Column ကနေ B5 အထိကို ပေါင်းဖို့ပါ။
INT(SUM(C2:C5)/100) ဆိုတာကတော့ " ပြား " ရဲ့အောက်က C2 Column ကနေ C5 ထိအောင် ပေါင်းပြီး၊ " ကျပ် " ထွက်လာအောင် 100 နဲ့စား၊ အဲဒါပြီးမှ နောက်က ဒဿမကိန်း မပါအောင် INT နဲ့ ကိန်းပြည့်ပဲထားတာပါ။ အဲဒီက ကိန်းပြည့်ကိုမှ ဟိုဘက်က " ကျပ် " ဖက်က ပေါင်းလို့ရတာနဲ့ ( SUM(B2:B5)+INT(SUM(C2:C5)/100) ) သွားပေါင်းတာပါ။ ဒါက ကျပ်ကိစ္စပေါ့။
&" ကျပ် "& ကတော့ ရှေ့ကပေါင်းထားတာရဲ့ နောက်မှာ ကျပ် ထည့်ဖို့အတွက် ထည့်ထားတာပါ။ Formula မှာ စာသားပြချင်ရင် " " ကြားမှာ ထည့်ရေးရပါတယ်။ Space ခြားချင်ရင် အဲ့မှာ Space ခြားပေးရပါတယ်။ & ကတော့ ရှေ့က Formula နဲ့ စာသားကို တွဲဖို့အတွက် ကြားထဲမှာ ထည့်ပေးရတာပါ။ နောက်က & ကလည်း အတူတူပါပဲ။ နောက်က Formula နဲ့ တွဲဖို့အတွက်ပါ။
100*MOD(SUM(C2:C5)/100,1) ကိုပြောရမယ်ဆို SUM(C2:C5)/100 ကတော့ " ပြား " အောက်က C2 Column ကနေ C5 ထိအောင် ပေါင်းပြီး၊ " ကျပ် " ထွက်လာအောင် 100 နဲ့စားတာပါ။ အဲဒါကိုမှ ဟိုဖက်က ကျပ်ဖက်မှာပေါင်းပြီးသား ကိန်းပြည့်မပါဘဲ အကြွင်းပဲရအောင် MOD(SUM(C2:C5)/100,1) MOD Function နဲ့ အကြွင်းထွက်အောင် ,1 နဲ့စားတာပါ။ 100* ကတော့ အကြွင်းထွက်လာတဲ့ ဒဿမကိန်းကို ဆယ်ဂဏန်းအနေနဲ့ ပြဖို့အတွက် ၁၀၀ နဲ့ မြှောက်တာပါ။ &" ပြား" ကတော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း " ပြား " ကို ထည့်ပြီး ဖော်ပြချင်လို့ ထည့်ထားတာပါ။
အခုလောက်ဆို သဘောပေါက်မယ် ထင်ပါတယ်။ SUM , INT .. စတဲ့ Function တွေနဲ့ တွဲရေးရတဲ့အတွက် ဂဏန်းတွေကိုတော့ မြန်မာလိုပေါ်အောင် လုပ်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်က Excel ကို အခြေခံလောက်ပဲ သိပြီး လက်တွေ့စာရင်းဇယားတွေနဲ့ မလုပ်ဖူးတော့ အပေါ်ပိုစ့်မှာ အစ်ကိုမေးထားတာကိုတော့ သိပ်နားမလည်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ တစ်ခုချင်းစီ ပုံလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ တွက်ချက်ပုံကို သေသေချာချာလေး ပြောပြပေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကူပြီး စဉ်းစားပေးနိုင်ကောင်းပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ ခင်ဗျာ..
ဇာနည်စိုး, g00gle, seamonkey, tu tu, zo
16-10-2017, 05:45 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Oct 2017
ကျွန်​​တော်​သိချင်​တာက​လေ excel မှာ ဂဏန်း​တွေကို​ပေါင်းတဲ့အခါ ၀​နေရာမှာ - ထည့်​ရင်ေါင်းခြင်ှးာ earr တတ်​သွားတယ်​ အကယ်​၍ ၀ ​နေရာမှာ-
ထည့်​​ပေါင်းရင်​ total မှာ earr မပြဘဲ ရှိတဲ့ဂဏန်း​ပေါင်းခြင်း​တွေပဲ​ပေါ်​အောင်​ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲခင်​ဗျ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဇမ္ဗူ​ကျော်​ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဇမ္ဗူ​ကျော်​
custom format, excel, office, table, tip
Learning Excel 2003 (Myanmar Version) phyomyintthein E-Books & Tutorials 51 29-03-2012 10:47 AM
excel shortcut မောင်တေဇာဝင်း E-Books & Tutorials007-05-2008 03:31 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 07:20 AM